Over 60+ Android Games Infected With Malware ~ BEST Computer Centre (Myeik)
Android စုစည်းမှုများ App-Game
I OS စုစည်းမှုများ App-Game
Over 60+ Android Games Infected With Malware
Security researchers discovered over 60 Android games on Google’s official Play Store are infected with malware.
According to Dr.Web’s security researchers these Android games are containingamalicious trojan namedAndroid.Xiny.
30 different developers were responsible for uploading these 60+ games which is infected with Malware. By downloading any one of these Games personal information of users who download are collected and sent toaremote C&C (command and control) server.
Once this data is collected and sent to the C&C server, based on the user’s phone specifications, the malware operator would tell the trojan to display ads on the user’s screen. It also downloads other malicious apps and infect the device.
It collects very reliable information including IMEI and IMSI identifiers, mobile operator information, country and language settings. It further collected the information of the OS version, MAC address of the phone, kind of memory card inserted into the device and the app from where the Trojan was getting all the information.
BEST Computer Centre သည်
♥ ♥ ♥ ♥ BEST Computer Centre မှ နွေးထွေးစွာကြိုဆိုပါ၏... ♥ ♥ ♥ ♥
အခြေခံ အီလက်ထရွန်းနစ် နည်းပညာ လေ့လာလိူသူအတွက်စာအုပ်
Download - www.mediafire.com -မြန်မာပြန်အခြေခံစာအုပ် Ref: http://www.zwmnna.com/2013/04/blog-post_25.html
အခြေခံသင်တန်း - iOffice 2010 Course ကွန်ပျူတာကို အခြေခံမှစ၍ လေ့လာလိုသူများအတွက် ရုံးလုပ်ငန်းနှင့် အခြားသောလုပ်ငန်းများတွင် အခ...
စာရင်းကိုင် LCCI သင်တန်းများ စတင်ဖွင့်လှစ်ပါမည်
Android Phone Root လုပ်ချင်သူများအတွက် Root လုပ်နည်း အမျိူးမျိူး
Android ဖုန်းနဲ့ ပတ်သက်ပီး အခြေခံကျကျ ရေးပြထားတဲ့ စာအုပ်ကောင်းလေးပါ ဒီလင့်မှာ Download ယူပါ - www.mediafire.com/Root လုပ်နည်းစာအုပ်...
ကလေးသူငယ် ပြုစုပျိုးထောင်နည်း - ဒေါက်တာတင်မောင်ထွေး (ဒေါက်ထွေးဆေးမန်း)
စာအုပ်အမည် - ကလေးသူငယ်ပြုစုပျိုးထောင်နည်း စာရေးသူအမည် - ဒေါက်တာ တင်မောင်ထွေး (ဒေါက်ထွေး ဆေးမန်း) စာအမျိုး...
မိုဘိုင်းမျိုးစုံ Root လုပ်နည်းနှင့် အခြေခံလိုအပ်ချက်များ - အာကာဖြိုး (နည်းပညာ)
စာအုပ်အမည် - မိုဘိုင်းမျိုးစုံ Root လုပ်နည်းနှင့် အခြေခံလိုအပ်ချက်များ စာရေးသူအမည် - ...
Phone နဲ့ ကွန်ပျုတာ အင်တာနက် ချိတ်ဆက်နည်း အသုံးပြုလမ်းညွှန် ( Android-Java-ios)
Android -Java- ios ဖုန်းအမျိုးအစုံမှာ အင်တာနက်လိုင်း ဖွင့်နည်းနှင့် အသုံးပြုနည်းများ Download - ကွန်ပျုတာ အင်တာနက် ချိတ်ဆက်နည်း
WiFi အကြောင်း သိကောင်းစရာများ
WiFi ဘာလဲ၊ ဘယ်လဲ ယခုအချိန်တွင် WiFi မှာ အတော်ပင် အသံကျယ် လောင်ကာ ပြည်တွင်း၌ပင် တွင်ကျယ်လာပြီဖြစ်သည် ကို မြင်တွေ့ရသည်။ ထို့ကြောင့် WiFi နှင...
ဘဝအတွက် အကျိုးရှိအောင် စာဖတ်နည်း ၁၂ ချက်
အဆွေ စာဖတ်တတ်တယ်ဆိုတာကို ကျွန်တော်သိပါတယ်။ ဘာလို့ဆို ရှေ့က စာကြောင်းကိုဖတ်ခဲ့ပြီး အခုဒီစာ ကြောင်းကိုပါ အဆုံးအထိ လိုက်ဖတ်နေ လို့လေ။ ဒါက ကျွ...
Sony Xperia Ray ST18i ကို Firmware Upgrade 4.0.3 ICS တင်နည်း
ပထမဆုံးဒါလေးတွေအရင် Download လုပ်ပါ။ Flash Tool.exe Ray Firmware ICS အရင်ဆုံး Flash Tool ကို Install ဆွဲပါ။ ပြီးရင် Run လိုက်ပါ။ ...
သင့်ရဲ့Email လိပ်စာသာထားခဲ့ပါက ပို့စ်အသစ်တင်တိုင်းပို့ပေးပါမည်:
Android Tool (35)
BEST သင်တန်း (6)
Firmware တင်နည်းများ (27)
Hard Reset-Unlock (3)
Root လုပ်နည်းများ (9)
Security antivirus (2)
နည်းပညာဆိုင်ရာ စာအုပ်များ (17)
Ko Aung Thu Win. Powered by Blogger.
Filecloud | Mediafire | Sharebeast ============== ~~~~ Win RAR v-4.01~~~~ Ifile.it | Mediafire | Mirrorcreator
♥ ♥ ♥ ♥ BEST ကွန်ပျူတာသင်တန်းတွင် လစဉ် တန်းခွဲသစ်များ ဖွင့်လှစ်ထားပါသည်... ♥ ♥ ♥ ♥
Copyright © BEST Computer Centre (Myeik) | Powered by BEST Computer Centre
Design by Aung Thu Win | Facebook Address: Facebook - Page: | အမှတ် (၁၇၉)၊ မင်္ဂလာလမ်း၊ ကြောင်ငယ်ရပ်၊ မြိတ်မြို့။